Sundarbans မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ကျား ၁၀၀ ကျန်သည် အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
Sundarbans ရှိဒီရေတောကျားအရေအတွက်သည်ယခင်ကယုံကြည်ထားခြင်းထက်နည်းသည် တရားဝင်ရင်းမြစ်များအရသစ်ပင်များတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုရေတွက်ရန်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူပြီးနောက်
သာ Sundarbans မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိဒီရေတောများတွင်ကျား ၁၀၀ ခန့်ကျန်ရှိနေသည်ယခင်ကရေတွက်ခဲ့သောခန့်မှန်းခြေကိန်းမှဝေးသည်။ ကရင်ကျား ၄၄၀ ခန့်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူစဉ်ကကမ္ဘာပေါ်ရှိဒီရေတောကြီးနှင့်ဤကြောင်ကြီးများ၏နေရင်းဒေသတစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးသောဒီရေတောများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အစိုးရ၏တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိ Tapan Kumar Dey ကယခုနှစ်Aprilပြီလတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သောကင်မရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကျားအရေအတွက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ပျမ်းမျှ ၁၀၆ ပေးတဲ့ ၈၃ နဲ့ ၁၃၀ ကြားမှာ.
ဘင်္ဂလားကျား အဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယတွင်နေထိုင်ကြသည်ဘယ်မှာတနိုင်ငံလုံး၌တည်၏ သူတို့ထဲက 2.226 ၏နံပါတ်ရှိပါသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ နီပေါ၊ ဘူတန်၊ တရုတ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်လူ ဦး ရေနည်းပါးသည်။
Monirul Khan၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Jahngirnagar တက္ကသိုလ်မှသတ္တဗေဒပါမောက္ခနှင့်အမျိုးသားအဆင့်မှာကြောင်မျိုးစိတ်များဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူက လေ့လာမှုကသူ၏အဆိုးရွားဆုံးစိုးရိမ်မှုများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်.
Khan ကထိန်းသိမ်းထားသည် အစိုးရသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရမည်သစ်တောနယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ကြောင့်သူတို့၏အရေအတွက်ကျဆင်းလာနေသည်။
The Wildlife Foundation မှပြောကြားသည် ကျားများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သူတို့၏အရေအတွက်သည် ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ၃၂၀၀ သို့ကျဆင်းသွားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Sundarbans မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရွှံ့နွံတွင်ကျား ၁၀၀ သာကျန်သည်